Indlu yosapho, iBaie de Somme, iHauts de France
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLorette & Gérard
3 recent guests complimented Lorette & Gérard for outstanding hospitality.
Ngaphezu kwegîte engenabuntu nebandayo, sirenta indlu yethu yelizwe apho sithanda ukuza kutshaja iibhetri zethu.
Kodwa njengoko singenako ukuya khona rhoqo njengoko singathanda, sidlulisela kubantu abathandana nomtsalane welitye elidala, izindlu ezingaqhelekanga kunye nendalo.
Kufuphi nehlathi elikhulu kunye nemizuzu engama-20 ukusuka kwiBay of Somme, uya kuziva usekhaya apho nokuba liliphi ixesha lonyaka.
Le indlu nekhitshi banzi kakuhle ngokwaneleyo, enkulu eqaqambileyo ophilayo igumbi kunye neziko Faka, a lounge TV, igumbi uhlamba, yangasese eyahlukileyo, igumbi umva kumgangatho osezantsi. Kitchen afakelwe kunye iyatshona, enkulu efrijini / efrijini kunye igumbi lokuhlamba impahla (umatshini wokuhlamba kunye nesomisi).
Phezulu, indawo yokumisa isebenza kwicala elinye amagumbi okulala amabini adibanayo anebhedi ephindwe kabini eyi-160 kwenye kunye neebhedi ezimbini ezilungisiweyo kwelinye (ungawashukumisi); kwelinye icala, igumbi lokulala eline-double bed 160 kunye negumbi lokulala elikhulu kunye ne-1 ibhedi ephindwe kabini i-160 (yenziwe ngeebhedi ezi-2 ezizimeleyo kunye) kunye ne-crib ye-1 yomntwana. La magumbi okulala ama-2 ahlukaniswe yindawo yamanzi ene-WC kunye nesitya sesandla; kodwa ukufikelela kwigumbi lokulala le-attic kudlula kwigumbi lokulala elikhulu.
Indlu yethu zokuba nantoni na ixesha enkosi Injengokubengezela kabini, ukufudumeza igesi (ezongezelelweyo oyile zokufudumeza kwigumbi eliphezulu i), kweziko Faka apho izimemo cocooning kwaye kunyusela kuwe ngeengokuhlwa yasekwindla ezintle okanye ngokuhlwa. Busika yi yangaseMlilweni.
Ukusuka entwasahlobo ehlotyeni, uya simangaliswe esezansi ezahlukeneyo ukuba indalo uya Endabuqwebela kuni. Umthi cherry kunye nomthi apile ibiselityatyambile, lo Lilac, ezo amahle, lo clematis kwi olungaphambili phambi kwendlu, i hollyhocks ..
Ehlotyeni, uyakonwabela i-brunch okanye isidlo sasemini kwigadi ebiyelweyo ejikeleze i-600 m2 ngasemva kwendlu kunye / okanye uphumle kwizitulo zedesika onazo.
Kwicala elisebenzayo, le ndlu ikwilali apho unokuthi uthenge ngokulula ngeebhaka ezi-2, ivenkile enkulu e-1, i-delicatessen caterer.
Uya kufumana iziko lezonyango eli-1, abalungisi beenwele ezi-2, iziko lobuhle eli-1, iiflorists ezi-2, izindlu zokushicilela ezi-2, icinema eyi-1, iofisi yabakhenkethi enye ...
Ukunciphisa izinga ngokobude bokuhlala; ukunciphisa kuthathelwe ingqalelo ngokuzenzekelayo nje ukuba ixesha likhethiwe (i-1 ukuya kwiiveki ze-3)
Ukufika kwi-6 ntambama (ubuninzi be-8pm) ukuba kuchazwe ngokwemeko.
Ukuhamba emini ukuya kwiindawo zokuhlala eziphakathi.
Ukuhamba emva kwemini kunokwenzeka ukuhlala ngempelaveki.
Iindleko zokucoca zihlawuliswa ukongeza kwisixa-mali se-€ 60 ngokuhlala (ukucoca indawo yomlilo kubandakanywa)
Ngexesha le-Covid, ugcino lwendlu luyaqiniswa kwaye kukhuseleko lomntu wonke, ukunxiba imaski kuyafuneka xa unikezela ngezitshixo.
Amashiti kunye neetawuli azibonelelwanga, kodwa ziyafumaneka ukuba ziqeshwe (ixabiso elimiselweyo ngokuxhomekeke kwinani labaqeshi baya kwaziswa kuwe ngesicelo).
Irenti yelinen simahla yokuhlala ukusuka kwiiveki ezi-2.
Kwimeko yokurenta ilinen, iibhedi zenziwe xa ufika.
Iibhayisekile (indoda elingana nabantu abadala aba-3, ubungakanani bomntwana ofikisayo kunye nomntwana om-1 oneminyaka eli-10 ubudala) zinokufumaneka ukuze ziqeshwe (ipakethe ichazwe ngesicelo).
Eminye imidlalo yebhodi, itafile yeping-pong, itrampoline kunye nekheji yebhola (ibhola yogwebu evunyelwe kuphela) zikwakhona ukuze wonwabe nabahlobo okanye usapho.
Izilwanyana zasekhaya zamkelwe phantsi kweemeko ezithile.
Sincanyathiselwe kule ndlu kwaye siqinisekisa ukuba sikhetha iintsapho ezabelana ngexabiso elifanayo nathi: intlonipho, ububele, ukuzola kunye nengqalelo.
Yiyo loo nto singawavumeli amatheko kwaye sithanda iintsapho okanye izihlobo ezifuna ukuhlanganisana ukuze zonwabe kunye kwaye zonwabele ummandla.
Indlu ixhotyiswe kakuhle kakhulu kuba sifuna ukuba wonke umntu azive esekhaya ngokukhawuleza xa ewela umgubasi.
Ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya.
KweNdlu kubekwe kwilali kunye ezivenkileni (ziinqwelo-2, 1 ivenkile, 1 ekhemesti, 1 delicatessen, izindlu cofa 2, 1 iziko lonyango, 1 cinema, 1 ubuhle kwiziko, 1-ofisi babakhenkethi ...) kwaye kufuphi ihlathi kazwelonke Iihektare ezingama-4300, kuhambo oluhle ngeenyawo, ngehashe, ngebhayisekile yasezintabeni okanye ngemoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Lorette & Gérard
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Crécy-en-Ponthieu